Wararkii Caalamka ee Maanta iyo Warqabadka SBC International – SBC
Wararkii Caalamka ee Maanta iyo Warqabadka SBC International
China oo bayaan kulul ka soo saartay hadaladii Hillary Clinton ee ku tilmaamtay in Africa ay geli doonto gumeysi cusub
Beijing:- Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda China ninka lagu magacaabo Hong Lee oo aanan sheegin magaca xoghayaha arrimaha dibadda mareykanka Hillary Clinton ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadaladii Hillary Clinton ay oga hadashay awoodda sii koraysa China ku leedahay qaaradda Africa islamarkaana ka digtay in qaaradda Africa ay markale la kulmi doonto gumeysi cusub.
Mr Lee ayaa sheegay in China ay ahayd sida dalalka African-ka oo kale dhibane waxyeelo ka soo gaartay dhibaatadii gumeystayaashii islamarkaana ay garanayso waxa uu yahay gumeysi.
Lee ayaa intaas ku daray in China aysan weligeed aysan isku dayin in ay ku soo rogto dalalka African-ka rabitaankeeda ayna filayso in dhamaan loo wada eego iskaashiga china kala dhexeeyo qaaradda Africa eegitaan cadaalad ah oo waaqiciga ku dhisan.
Mr Lee ayaa ku nuuxnuuxsaday in China ay ixtiraamayso dowladaha African-ka iyo iskaashiga wadaaga ah ee kala dhexeeya qaaraddda Africa .
Hadalka xukuumadda China ayaa ku soo beegmaya xilli Xoghayaha arrimaha dibadda mareykanka haweenayda lagu magacaabo Hillary Clinton oo socdaal ku mareysa dalal kamid ah qaaradda Africa ayisweydiisay awooda sii koraysa ee dowladda China ee qaaradda Africa islamarkaana u digtay dalal ay ku tilmaamtay in ay yihiin saaxiibadda China ee qaaradda Africa.
Dowladda China ayaa sanaddii 2009 ku harqisay qaaradda Africa tobanaan bilyan oo dollar iyadoo sidoo kalana uu kobcay dhaqaalaha qaaradda iyo kan xukuumadda Beijing.
Indonesia oo xirxirtay dad lagu eedeeyey in ay amar ku bixiyeen in la sumeeyo ciidanka Booliska
Jakarta:- Booliska Indonesia ayaa gacanta ku dhigay i16 qof oo lala xiriirinayo in ay ka dambeeyeen amar ah in sunta loo yaqaan Ilsaynid lagu laayo ciidamada booliska dalka Indonesia.
Booliska ayaa qaaday olole lagu qabqabnayo eedeesanaayasha iyadoo ololaha qabqabashada si weyn looga dareemay goobo ku yaala daafaha caasimadda dalkaas ee Jakarta.
Afhayeen u hadlay booliska oo lagu magcaabo Colonel Boy Raffle ayaa sheeegay in ciidamada boolisku ay gacanta ku dhigeen sunta Ilsaynid iyo bastoolado badan gaar ahaan nooca aamusan oo u eg qaabka qalimaanta oo kale.
Warbaahinta ayaa sheegtay in ciidanka boolisku yihiin kuwa si gaar ah loo beegsanayo.
Booliska ayaa si isdaba joog ah u qabqabtay dad la tuhunsan yahay kadib markii ay ka heleen macluumaad dad la soo xirxiray kagadaal markii lagu dilay laba askari oo boolis ah gobolka Sulawiisi ee ku yaala bartamaha dalkaas bishii la soo dhaafay.
Wargeyska Jakarta Globe ee ka soo baxa xarunta dalka Indonesia ee Jakarta oo soo xiganaya afhayeenka booliska ayaa sheegay in dadka la qabqabtay ay kulugu lahaayeen shirqool lagu donayey in weeraro argagaxiso lagu qaado goobo kala duwan oo dalka Indonesia ah , halka toddobo kamid ah dadka la qabqabtay laga soo qabtay Jakarta kadib markii lagu tuhmay in ay qorsheenayeen in ay ku dilaan booliska sunta loo yaqaan Ilsaynid.
Afhayeenka ayaa intaas raaciyey in ay wadaan baaritaano ku aadan in hubka la qabtay uu yahay mid kooxaha laga helay ay farsameeyeen ama ay ka heleen dhinacyo kale.
Waxaa xusid mudan in bishii April ee la soo dhaafay qof naftii hure ah uu isku qarxiyey misaajid ay ku tukadaan booliska kaasi oo sababay dhaawaca 30 ruux.
Booliska ayaa ku eedeeyey dhacdadaas koox hubaysan oo cusub , waxaana boolisku qabqabteen tobnaan qof oo lala xiriiriyey in ay ka tirsan yihiin kooxdaas.
Sicir bararka India oo kor u dhaafay intii la filayey
Delhi:- Waxaa kor u kacay heerkii sicir bararka India inkabadan intii la filayey bishii May ee la soo dhaafay taasi oo saadaashu ay tilmaamayso in markale ascaarta faa’iidada laga yaabo in kor u kac ku yimaado.
Qiyaasta kororka ascaarta Jumlada ayaa gaatay celcelis %9.06 taasi oo ahayd bishii April %8.66.
Kor u kacan ayaa loo aaneenayaa in ay sabab u tahay kororka ku yimid ascaarta alaabaha warshadeysan maadaama ascaarta shidaalka iyo cunada uu hoos u dhac ku yimid.
Bangiga dhexe ee India ayaa la filayaa in uu shaaca ka qaado maalinta khamiista go’aanka uu ka qaadan doono arrinta ku saabsan ascaarta faa’idada.
Dadka u kuurgala arrimaha dhaqaalaha ayaa saadaalinayey in kor u kac aan buurnayn uu ku iman doono heerka sicir bararka maadaama ay hoos u dhacday qiimihii shidaalka caalamka bishii May ee la soo dhaafay.
Blair oo sheegay in uu aqriyo Qur’aanka Kariimka maalin walba
London:- Sida ay qortay jariidada Daily Mail ee ka soo baxda magaalada London ee carriga Britain ra’iisal wasaarihii hore ee ingiriiska ahna ergayga guddiga afarleyda ee howlaha nabad ku soo dabaalida bariga dhexe Tony Blair ayaa sheegay in uu maalin walba uu aqriyo Qur’aanka Kariimka.
Blair ayaa intaas ku daray in Qur’aanku uu u aqriyo si uu u fahmo arrimaha ku tacaluqa dhacdooyinka caalamka islamarkaana ay shakhsi ahaantiisa u tahay mid waxtar u leh shaqadiisa maadaama uu yahay ergay u qaabilsan guddiga afarleyda nabad ku soo dabaalidda bariga dhexe kaasi oo ka kooban QM, mareykanka, Midowga Yurub iyo Russia.
Blair oo ah catholic ayaa cambaareeyey baaqii ninkii mareykanka ahaa ee ku baaqay in la gubo Kitaabka Qur’aanka Kariimka, wuxuuna ugu baaqay in uu aqriyo Qur’aanka Kariimka halkii uu ka gubi lahaa.
Marsii horeysay gabar la dhalatay xaaska Tony Blair oo lagu magcaabo Loren Both oo rumeysay Diinta Islaamka ayaa sheegtay in ay ku rajo weyn tahay in rumeynteeda Diinta Islaamka ay wax ka badeli doonto afkaarta uu ka aaminsan yahay dumaashigeed Diinta Islaamka.
Loren Both ayaa hadda ku labisata xijaabka, islamarkaana ku tukata shanta salaadood Masjid u dhow gurigeeda.
Loren Both oo hadda u shaqeysa kanaalka Press TV ee laga leeyahay Iran kaasi oo xaruntiisu London ayaa la’aaminsan yahay in ay kamid ahayd dadkii sida aadka ahaa uga soo horjeeday duulaankii ciraaq.
Loren oo booqasho ku tagtay dalka Iran ayaa markii ay dib ugu soo noqotay London ku dhawaaqday in ay rumeysay Diinta Islaamka islamarkaana ay bilowday barashada Qur’aanka Kariimka iyadoo sidoo kalana joojisay cunida hilibka doonfaarka iyo cabidda khamriga maadaama ay koob ama laba koob oo nooca loo yaqaan Nabbed ay maalin walba ku dhufan jirtay.
Sida wargeysku uu sheegay Loren oo ka hor inta aysan Islaamin booaqasho ku tagtay dhulka filistiin ayaa aad uga heshay dhaqanka Muslimiinta islamarkaana la qeybsatay filistiiniyiinta go’doonka Israel ku hayso dhulkooda.